Imikhwa esempilweni ekunceda uzive ulungile | Bezzia
UToñy Torres | 14/01/2022 14:00 | YeNtlalontle, Iingcebiso zezempilo
Imikhwa ziindlela zokuziphatha eziphindaphindwa rhoqo, izenzo ezimele zifundwe kuba azifiki njengomgangatho, azizalwa nazo. Le mikhwa okanye imikhwa inokuba mibi, amasiko enzakalisa impilo yakho yomzimba nengqondo. Kodwa kukwakho nemikhwa esempilweni, leyo ikwenza uzive wonwabile, ube nempilo entle, unandiphe izinto zobomi, kwanezona zintle kangako.
Loo mikhwa isempilweni ezo zikunceda ube nempilo entle ngokweemvakalelo kwaye uzive ulungile ngawe, eluswini lwakho ngobuhle bakho kunye neziphene zakho. Kungenxa yokuba imikhwa ephilileyo zizenzo ubani azenzayo ukuze kungenelwe yena. Kwaye yeyiphi indlela engcono yokwandisa ukuzithanda kunye nokuzithemba kunokusebenzela ukufezekisa olona guqulelo lungcono lomntu ngamnye.
1 Indlela yokuguqula isenzo sibe ngumkhwa
1.1 Eyona nto ibalulekileyo kwimikhwa enempilo, khathalela umzimba wakho
1.2 Phumla, ulale kakuhle, kwaye ufumane iiyure ezaneleyo
1.3 Qhagamshelana nabanye abantu
1.4 Lawula uxinzelelo
1.5 Khathalela umfanekiso wakho
Indlela yokuguqula isenzo sibe ngumkhwa
Kuthiwa ukwenza isenzo umkhwa, kuthatha iintsuku ezingama-21 ukwenza isenzo esichaziweyo. Xa olo sukelo luphunyeziweyo, umkhwa ufunyanwa kwaye uqhutyelwa ngokuzenzekelayo, yinxalenye yemisebenzi yemihla ngemihla. Ngokuqinisekileyo yonke imihla uphinda amanyathelo afanayo xa uvuka, uye kwindlu yangasese, ube nekhofi, uqale ukugqoka ngokulandela iphethini.
Zonke ezo zenzo ziphindaphindwa yonke imihla yimikhwa efunyenwe ngokuhamba kwexesha. Eminye imikhwa mibi, yileyo ikuthintelayo ukuba ube sempilweni okanye leyo ikuthintelayo ekuphuculeni iinkalo ezahlukahlukeneyo zobomi bakho. Abanye, ngakolunye uhlangothi, bakuvumela ukuba ube nempilo ephilileyo ngokomzimba, ngokwengqondo nangokwentlalo. Ezi zezinye ze imikhwa enempilo eya kukunceda uphile ubomi obunempilo kunye nolonwabo.
Eyona nto ibalulekileyo kwimikhwa enempilo, khathalela umzimba wakho
Landela ukutya okunempilo, okuhlukahlukeneyo, okunokulinganisela kunye nokulinganisela, kunye nokutya kwendalo okondla umzimba wakho kwaye uvumele ukuba ube nempilo. Zilolonge rhoqo ukugcina umzimba wakho womelele kwaye ikuvumela ukuba uvuke suku ngalunye ukuze ulwele amaphupha akho. Ukuphelisa izinto eziyenzakalisayo, njengecuba, utywala kunye neemveliso ezilungisiweyo. Le yindlela yokunyamekela umzimba wakho, ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle.
Phumla, ulale kakuhle, kwaye ufumane iiyure ezaneleyo
Ngexesha lokulala iiseli zomzimba ziyaphinda zikhule, izihlunu namathambo akho ukulungiselela usuku olutsha. Ukujongana nazo zonke iimeko zosuku ngalunye kubalulekile ukuba nomzimba nengqondo ephumleyo. Into engenakwenzeka ukuba ungalali iiyure ezaneleyo kwaye awulali ngokwaneleyo. Ziqhelanise nokulala kwangoko, yenza inkqubo yokulala rhoqo ebusuku kwaye ufumane iingenelo zokulala ngokuphumla.
Qhagamshelana nabanye abantu
Umntu unentlalontle ngokwendalo, sidinga unxibelelwano nabanye abantu kwaye sidale ubudlelwane esinokwabelana nabo ngobomi. Ukonwabela amaxesha okuhlala kuzisa uncedo oluninzi kwimpilo yengqondo. Lungamela ubudlelwane bakho bobuqu khangela imisebenzi apho unokudibana nabantu ababelana ngeyakho izinto ozithandayo, ncokola nabo basondeleyo kuwe ukuphucula impilo-ntle ngokwasemoyeni.
Uxinzelelo yintshukumo yendalo yomzimba, indlela yokukubeka ulumke xa imeko ethile ifuna oko. Ingxaki kukuba ukuba uxinzelelo luqhubeka emva kokuba le meko idlulile, iba yinto engapheliyo kwaye inokuchaphazela kakubi impilo yomzimba kunye neemvakalelo. Uxinzelelo ngunobangela wezifo ezininzi, ngoko kubalulekile ukufunda ukuyilawula ukuze unandiphe umgangatho wobomi obubhetele.
Khathalela umfanekiso wakho
Ukhathalelo lomfanekiso womntu luhlala lubhidaniswa kunye nokungakhathali. Kodwa inyaniso yeyokuba, ukunyamekela inkangeleko yakho yobuqu kubandakanya ukucoceka, ukunyamekela inkangeleko yakho ukuze uzive ukhululekile kuwe, ekugqibeleni ube nokuzithemba okungcono. Konke oku kukukhokelela ekubeni yonwabela ukuzithemba kwaye ikuvumela ukuba uphuhlise eminye imiba yobomi bakho ngesimo sengqondo esingcono.
Zama ukubona icala elihle lobomi, kuba inyaniso yokuba nobomi ngokwayo isipho esinomhla wokuphelelwa yisikhathi. Yonwabela ixesha uwedwa ukuze uqhagamshelane neyona nzulu yakho "I". Zijikeleze nabantu abazisa izinto ezilungileyo ebomini bakho, abancedisayo kwaye bakwenze uzive uvuya. Yitya ngokufanelekileyo, lala ngokwaneleyo, sela amanzi kwaye unyamekele impilo yakho. Zezi imikhwa esempilweni enokukunceda ukuziva ngcono yonke imihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Iingcebiso zezempilo » Imikhwa esempilweni ekunceda uzive ulungile